प्रतिष्ठानमा पंगेनीको जित, खत्रीको दोस्रो हार, असन्तुष्ट पक्ष अर्को संस्था दर्ता गर्ने छलफलमा – Himal FM 90.2 MHz
प्रतिष्ठानमा पंगेनीको जित, खत्रीको दोस्रो हार, असन्तुष्ट पक्ष अर्को संस्था दर्ता गर्ने छलफलमा
कला र साहित्य Author September 28, 2016
सोलुखूम्बु । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको छैठौं महाधिवेशनबाट गायक बद्री पंगेनीको नेतृत्वमा ३९ सदस्यीय कार्यसमिति चयन भएको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रमेश विजीले ८८३ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनका प्रत्यासी ऋषिलाल श्रेष्ठले ३८२ र गायक विमलराज क्षेत्रीले ४६२ मत ल्याएका छन् ।
त्यसैगरी प्रथम उपाध्यक्षमा पशुपति शर्मा निर्विरोध निर्वा्चित भइसकेका थिए । द्धितीय उपाध्यक्षमा रामजी खाँडले विजयी हासिल गरेका छन् । महासचिवमा भएको चुनावमा सुवास के. सी. विजयी भएका छन् । उनका प्रत्यासी शिरिष देवकोटालाई हराउँदै केसी महासचिवमा विजयी भएका हुन् ।
उपमहासचिवमा चोलेन्द्र पौडेल ९७६ मतले विजयी भएका छन् भने उनका प्रतिद्धन्द्धी नारायण लेकालीले ७०९ मत पाएका छन् । त्यसैगरी सचिवमा शंकर बिसीले ११०८ मत ल्याएर विजयी भएका छन् भने सचिव पदमा नै खुमन अधिकारीले १०१५ र कृष्ण रेउलेले ७५५ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । कोषाध्यक्षमा दीपक खड्का निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् भने सहकोषाध्यक्षमा टीका पुनले १२६४ मत ल्याएर प्रतिस्पर्धी नारायण भुसाललाई पछि पार्दै विजयी भएकी छिन् ।
त्यस्तै खुला सदस्य पदमा भने बहुमत ल्याएर शिव हमाल विजयी भएका हुन् भने महिलातर्फ देवी घर्ती सबैभन्दा अगाडि देखिइन् । हमालले १४५५ र घर्तीले १४४१ बहुमत ल्याएर विजयी भएका हुन् । त्यसैगरी खुलातर्फको सदस्यमा पार्वती राई १३३६, राजु ढकाल १२४९, कुलेन्द्र विश्वकर्मा १२०९, राजन ठकुरी १०५७, वसन्त थापा ९२८, सन्तोष आलेमगर ९०१, जीवन दाहाल ८८२, हरि डाँगी ८५८, प्रचण्ड जीसी ८५४, रमेशराज भट्टराई ८५३, ईश्वरी प्रसाद भुसाल ८०६, राजन गुरुङ ७८०, विनोद बाजुराली ७७९ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । खुला सदस्यतर्फ १४ जनाको लागि ३४ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ।
महिलातर्फ देवी घर्ती १४४१, मुना थपामगर १२८८, पूर्णकला बिसी ८४१, जमुना राना ८१८, जानकी तारमी मगर ७८४ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । यसअघि नै महिला उपाध्यक्षमा रिता थापामगर निर्विरोध निर्वा्चित भएकी थिइन् भने महिला सचिवमा राधिका हमाल निर्विरोध भएकी थिइन् ।
प्रतिष्ठानका निर्वाचित पदाधिकारीलाई अघिल्लो कार्यकालको हिसावकिताव बरबुजारत र सपथ खुवाउने काम समेत बुधबार सकिएको छ ।
यसैबीच, विष्णु खत्रीले दोस्रो पटक पराजय भोगेका छन् । पाँचौ महाधिबेशनमा चन्द्र शर्मासंग हारेका खत्री यो पटक बद्रि पंगेनी संग हारेका हुन् । तर उनका केहि सहयोगीहरुले फर्जी मत हालिएको र राजनितिक रुपमा प्रतिष्ठान एमालेको कब्जामा गएको समेत फेसबुक टिप्पणी गर्न भ्याएका छन् । पुर्व महासचिब समेत रहेका खत्रीले अर्को पटक अध्यक्षमा दावेदार गर्ने नगर्ने बारे भने मुख खोलिसकेका छैन् ।
यसैगरी प्रतिष्ठानको नेतृत्व संस्थापन पक्षले हत्याउने क्रम भंग नभएपछि हतास मानसिकता लिएकाहरुले अर्को संस्था जन्माउने भित्री कसरतमा लागेको खुल्न आएको छ । स्रोतका अनुसार कसरतले मुर्त रुप लिएमा केहि हप्तामै आधिकारिता बाहिर आउनेछ ।